MAE Anosy : Fivoriana mikasika ny drafi-pirenena marolafy hiatrehana ny valanaretina Covid-19
mercredi, 17 février 2021 13:12
Notanterahina ny alatsinainy 15 febroary, teny amin’ny Ministeran’ny Raharaham-bahiny (MAE) Anosy, ny fivoriana mikasika ny drafi-pirenena marolafy iatrehana ny valanaretina Covid-19.
Nitarika izany ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, niarahana tamin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta, ireo solontenan’ny mpiara-miombon’antoka, ireo eo anivon’ny sehatra tsy miankina amin’ny fanjakana, ary ny teo anivon’ny fiarahamonim-pirenena.
Nandritra ny fivoriana dia nisy ny jery todika mahakasika ireo ezaka sy asa rehetra natao nandritra izay fotoana nisian’ny valanaretina Covid-19 izay ka nahafahana nifehy ny fihanak'ity valanaretina ity.
Niarahanan-dinika tao ihany koa ny lamina vaovao hapetraka mba tsy hampirongatra indray ny valanaretina satria afaka fotoana fohy dia hiditra ao anatin’ny vanim-potoanan’ny ririnina isika.
Nambaran’ny Praiminisitra ary fa « efa voafehy ny fihanaky ny valanaretina kanefa mbola tsy lefy tanteraka izy io eto amin’ny firenentsika », ary ny governemanta dia vonona hatrany hanohy ny ezaka hiadiana amin’izao valanaretina izao.
Etsy andaniny, ireo mpiara-miombon’antoka dia naneho ny fahavononany hifanome tanana amin’ny mpitondra fanjakana amin’izay ezaka rehetra mbola ho atao izay.
Notapahana nandritra io fihaonana io ihany koa fa hotohizana hatramin’ny volana jona ny fanatanterahana ny drafitra nasionaly marolafy, ary aorian’izay dia ny Plan Emergence Madagascar no drafi-pampandrosoana entina manatanteraka ireo programan’asam-panjakana rehetra.